Daisuke Namikawa – Cast – MMANIME
Bleach The story follows the adventures of Ichigo Kurosaki after he obtains the powers ofaSoul Reaper (死神, Shinigami, literally, "Death God") —adeath personification similar to the Grim Reaper — from another Soul Reaper, Rukia Kuchiki. His newfound powers force him to take on the duties of defending humans from evil spirits and guiding departed souls to the afterlife. The anime adaptation includes original storylines not found ...
TMDb: 8.2/10 550 votes
K-Project K-Project Info Anime Title: K Japanese: K Genres: Action, Super Power, Supernatural Type: TV Status: Finish Airing Episode: 13 Aired: Oct 5, 2012 to Dec 28, 2012 Season: Fall 2012 Studio: GoHands Duration: 24 min per ep Score: 7.56 Synopsis : ] Download K 720P Mediafire Related Anime K Series
Lord El-Melloi II Case Files: Rail Zeppelin Grace Note Overview Waver Velvet – The boy who fought side by side with the King of Conquerors, Iskandar, during the Fourth Holy Grail War in Fate/Zero. Time has passed, and the mature Waver has now adopted the name of Lord El-Melloi II. As Lord El-Melloi II, he takes on numerous magical and mystical cases in the Clock Tower, the mages' mecca... Makoto ...
Daily Lives of High School Boys Samada North ဆိုတဲ့ကြောငျးမှာ Tadakuni, Hidenori, Yoshitake တို့ သူတို့ရဲ့ ‌နစေ့ဉျအထကျတနျးကြောငျးသားဘဝကို ဘယျလိုဖွတျသနျးကွမလဲဆိုတာ.... Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12
THE GOD OF HIGH SCHOOL _____The God of High School_____ The God of Highschool ဟာ 2011 ​ထဲက ထွက်ရှိထားတဲ့ Yongje Park ရဲ့ webtoon တခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Webtoon ကို Crunchyroll Original Anime အဖြစ်ပြန်အသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပြီး Anime ဟာ 2020, July6ရက်နေ့စတင်ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ "Action, Sci-Fi, Adventure, Comedy, Supernatural, Martial Arts, Fantasy" အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Studio MAPPA ကနေ တာဝန်ယူ animate မှာဖြစ်ပါတယ်။ Episode ကတော့ 13 ခုထိပါမယ်လို့သိရပါတယ် ဇာတ်လမ်းကတော့... Mori Jin ဆိုတဲ့ ချာတိတ်ဟာ သူ့အဖိုးဆီကသင်ထားတဲ့ Taekwondo အားကိုးနဲ့ တိုက်ခိုက်ဖူးတဲ့ပြိုင်ဖက်မှန်သမျှကို အနိုင်ယူပြီး သူ့ကိုယ်သူ အသန်မာဆုံး အထက်တန်းကျောင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တိုက်ခိုက်ရတာကို နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး ပိုအစွမ်းထက်တဲ့ပြိုင်ဖက်ကို ...
TMDb: 8.6/10 votes
Katekyō Hitman Reborn! Reveiw By ShineHtetLin ဒီ Anime Series ကတော့ လူတိုင်းသိ ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်/မသိတဲ့သူလဲမသိဘူးပေါ့ စတင်မိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုရင် Anime Name လေးက Reborn တဲ့ 2006 လောက်ထဲက ထွက်လာတဲ့ Anime Series လေးပေါ့.... Episode အနေနဲ့ တော့ အပိုင်း ၂၀၀ ကျော်နေတဲ့ Long Series လေးပါ..... Review အနေနဲ့က ထွေ''ထူး''ရေးနေစရာမရှိပါဘူး ဘာမှ အသုံးမကျတဲ့ကောင်လေးက Vongola Mafia Familyရဲ့ ၁၀ယောက်မြောက် Boss ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးရင် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကြည့်သွားရမှာပါ.... Episode 1 Episode2Episode 3
TMDb: 9.1/10 14 votes
Kakushigoto Kakushigoto ____________ Kakushigoto:My Dad's secrect Ambition ဆိုတဲ့ Anime ဟာ Comedy Type Manga ကိုပွနျလညျရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ.... အဲ့ဒါကိုမှ ဒါရိုကျတာ Yuta Murano ကနရေိုကျကူးပွီး Studio ကတော့Ajia-do Animation works studio ဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအမြိုးအစားကတော့ comedy,slice of life,Shounen အမြိုးအစားဖွဈပွီး Joshiraku,Sayonara Zetsubou Sensei တို့ကိုရေးဆှဲတဲ့ Koji Kumeta ရဲ့လကျရာတဈခုလဲဖွဈပွနျပါတယျ ဇာတျလမျးလေးကိုဆကျရရငျတော့... အောကျလုံးနဲနဲပါတဲ့ Manga တှကေိုရေးဆှဲတဲ့ Manga ရေးအနုပညာရှငျ Kakushi Gotou နဲ့သူ့ရဲ့ အရမျးခဈြရတဲ့တဈဦးတညျးသောသမီးလေးHime-chan တို့အပျေါမှာဇာတျအိမျအခွတေညျထားတာဖွဈပါတယျ Kakushi ရဲ့အကွောကျဆုံးအရာကတော့ သူ့အလုပျကို သူ့ရဲ့တဈဦးတညျးသောခဈြသမီးလေးသိသှားမှာကိုပါ...အဲ့ဒါကွောငျ့လဲ" ငါသာ Manga ရေးတဲ့သူဆိုတာသိသှားရငျ,ငါ့သမီးလေးငါ့ကိုမုနျးသှားလမေလား" ဆိုတဲ့အကွောကျတရားကအမွဲလှမျးမိုးနခေဲ့ပါတယျ အဲ့ဒိတော့ သူ့ရဲ့အလုပျကိုသမီးလေးမသိသှားစဖေို့ရာ သူ့ရဲ့လကျထောကျနဲ့အယျဒီတာရဲ့ အကူအညီနဲ့နတေို့ငျးကိုဖုံးကှယျဖို့လုပျရငျးကြျောဖွတျဖို့ ကွိုးစားရပါတော့တယျ....???????? Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode ...
Digimon Adventure: ဒီကားလေးeကတော့2020 မှာ ထွက်ရှိလာမဲ့ကားပေါ့။ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့ Taichi Yagami ပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပေါ့။ သူက ငါးတန်း မူလတန်းကျောင်းသား သူ့ တွဲဖက်က Agumon. ဇာတ်လမ်းအစကတော့ Tokyo မြို့မှာ ကြီးမားတဲ့ network တိုက်ခိုက်မှူ့ ဖြစ်လာတယ် ။Taichi i ကတော့ သူ့ရဲ့ အားလပ်ရက်မှာ နွေရာသီ ခရီးသွားစခန်းကို သွားဖို့ပြင် ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒီကိစ္စဖြစ်လာတယ် ။ Taichi ရဲ့ အမေနဲ့ သူ့ညီမလေး Hikari တို့ဟာ ရထားပေါ်မှာ စီးနေတုန်း ရထားက မရပ်ဘဲ ဆက်မောင်းနေတယ်။အဲ့ဒါကို Taichi ကသိတော့Shibuya ဘူတာကို ကူညီဖို့ သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကိုသွားနေရင်း ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကတာ့ သူဟာ Digital World လို့ ခေါ်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးထဲရောက်နေပြီး ဒီကိစ္စကို ဖြေရှင်းဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့..... (Review ...
Anonymous Noise Romaji – Fukumenkei Noizu Burmese – အမည်မဲ့ဆူညံသံ/ အမညျမဲ့ဆူညံသံ Genres – Music, Romance, Shoujo Episodes – 12 Duration – 23 min. Rating – PG-13 – Teens 13 or older Subtitle – Myanmar Subtitle Presented By -Yukimura Family (WOA-MM) REVIEW – [Zawgyi]_ဒီ serie လေးကတော့ Nino ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကောင်လေး နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ သီချင်းဆိုရတာကို အရမ်းဝါသနာပါနှစ်ခြိုက်တဲ့ Nino ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့အတိတ်မှာ လမ်းခွဲမှု နှစ်ခုနဲ့ ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ ပထမကတော့ သူမရဲ့ အချစ်ဦး Momo ဆိုသူ နဲ့ ဒုတိယကတော့ သီချင်းတွေရေးသီတဲ့ Yuzu ဆိုသူပါ ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ ...
Mobile Suit Gundam 00 s2 Gundam OO s2 Seasonကတော့season1ရဲ့အဆကျပါ:3 S21ဖွဈပွီး၎နှဈအကွာမှာပေါ့ Celestial Beingရဲ့ကွားဝငျမှုတမေရှိတော့တာ၎နှဈလောကျပေါ့အဲ့အခြိနျမှာပွညျထောငျစုကpeace keeping force တဈခုဖှဲ့စညျးထားတယျ Autonomous peace keeping force A.LAWS လို့လညျးချေါတယျ ဒါပမေယျ့နောကျကှယျမှာတော့အဲ့လိုငွိမျးခမျြးရေးတမေလုပျဆောငျဘဲပွညျသူတကေိုအစုလိုကျဖမျးခဲ့တယျ.အဲ့တာကိုcelestial being ကပွနျပျေါလာပွီးသူတို့ရဲ့gundamတနေဲ့တားဆီးမလားဆိုတာကတော့.... Plotတလေညျးအရမျးမိုကျပွီးcharacterတဈခုခငျြးဆီကလညျးမတူတဲ့feel တနေဲ့ကွညျ့ရမှာဖွဈလို့mechaကွိုကျသူတလေကျ မလှတျသငျ့ပါဘူးနျော Zawgyi Seasonကေတာ့season1ရဲ့အဆက္ပါ:3 S21်ဖစ်ပြီး၎နစ်ြအကြာမြာပေါ့ Celestial Beingရဲ့ကြားဝင္မှုတေမရြိတော့တာ၎နစ်ြလောက်ပေါ့အဲ့အခ်ိန္မြာ်ပည်ထောင္စုကpeace keeping force တစ္ချုဖဲ့စည်းထားတယ် Autonomous peace keeping force A.LAWS လို့လည်းခေါ်တယ် ဒါပေမယ့်နောက္ကြယ္မြာတော့အဲ့လိုငြိမ်းခ္မ်းရေးတေမလုပ်ဆောင္ဘ်ဲပည်သူတေကိုအစုလိုက္ဖမ်းခဲ့တယ်.အဲ့တာကိုcelestial being က်ပန်ပေါ်လာပြီးသူတို့ရဲ့gundamတေနဲ့တားဆီးမလားဆိုတာကေတာ့.... Plotတေလည်းအရမ်းမိုက်ပြီးcharacterတစ္ခုခ်င်းဆီကလည်းမတူတဲ့feel တေနဲ့ကြည့်ရမြာ်ဖစ္လို့mechaကြိုက်သူတေလက် မလွှတ်သင့်ပါဘူးနော် Episode 1 Episode2 Episode3 Episode4 Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode 9
Magical Sempai Tejina Senapi Name - Tejina Senpai( မကျြလှညျ့ဆရာ Sempai မလေး ) Genres - Comedy,School,Seinen,Eccchi Status - Currently Airing Aired - Jul 2, 2019 to ? Duration - 12 mins ဟုတျကဲ့။ အားလုံးပဲ ကြှနျတျော Bk ရှေးခယျြထားတဲ့ Summer Ongoing ကောငျးလေးတဈခုနဲ့မိတျဆကျပေးပါရစေ။နာမညျကတော့ Tejina senpai ချေါ Magical Sempai ဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးမိတျဆကျကိုတော့အောကျမှာဆကျဖတျလိုကျပါ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " တဈနေ့ ငါ ခဈြဖို့ကောငျးပွီး ထူးဆနျးတဲ့စီနီယာမမ တဈယောကျနဲ့တှဆေုံ့ခဲ့တယျ။" တဈနမှေ့ာအထကျတနျးစတကျစကောငျလေးတဈယောကျဟာ ကြောငျးကလပျတဈခုကိုဝငျရနျလိုကျရှာနစေဉျ မကျြလှညျ့ပွနတေဲ့စီနီယာ Senpiမမ နဲ့ထိပျတိုကျသှားတှမေိ့ပါတယျ။ အမှတျမထငျတှတေ့ာဖွဈသျောလညျးကံမကောငျးစှာဖွငျ့ MC ဟာ မကျြလှညျ့ဆရာမလေး Senpai မမ၏ လကျထောကျတဈယောကျရာထူးကိုဘုမသိဘမသိရဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။ခကျတာကသူ၏ စီနီယာမမသညျ မကျြလှညျ့ပွရာတှငျ အမွဲတမျး နမျောနမဲ့နိုငျသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုနဲ့သူတို့တှဘေယျလိုမြားဆကျပွီး အလှဲလှဲတှဖွေဈကွဦးမလဲဆိုတာကို အပတျစဉျ ...
Fate/Zero Fate Zero s1 + s2 Name -- FATE ZERO Number of Seasons --2Episodes -- Season 1 (13 episodes ) Season2(12 episodes ) Aired -- Oct 2, 2011 to Jun 23,2012 Studio ...
TMDb: 7.9/10 78 votes
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Demon slayer (Kimetsu no yaiba) Mmsub/စဆုံး Total ep-26 Genres :Action, Demons, Historical, Shounen, Supernatural Synopsis (Crd) လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာကတည်းက လူတွေကိုသတ်ဖြတ်စားသောက်တဲ့ Demon (မကောင်းဆိုးဝါး) တွေဟာ တောတွေထဲမှာ နေထိုင်ကျက်စားကြတယ် ဆိုတဲ့ ကောလဟာလတချို့ရှိခဲ့ပါတယ် သူတို့ရန်ကိုကြောက်လန့်ရတဲ့လူတွေဟာ ညဘက်ဆိုအပြင်မထွက်ရလောက်အောင်ပါပဲ ဒဏ္ဍာရီတွေအရ အဲ့ဒီ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကိုညဘက်တွေမှာအမဲလိုက် နှိမ်နင်း နေတဲ့ Demon slayer တစ်ယောက် ရှိတယ်လို့လဲ ဆိုကြပါတယ်........... Tanjiro Kamado ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဟာ ရိုးသားပြီး ကြင်နာတတ်ရှိတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ ဖခင်မရှိတော့ ပေမဲ့ သူဟာ သူ့ရဲ့ မိသားစုနဲ့အတူ တောင်ပေါ်ကအိမ်လေးမှာ နေထိုင်ကြပာတယ် သူကိုယ်တိုင်ကတော့ တောင်အောက်က ရွာတွေ မှာ မီသွေးဆင်းရောင်းပြီး မိသားစုဝမ်းစာအတွက်ရှာဖွေနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူ့မိသားစုရဲ့နွေးထွေးငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝက တစ်နေ့သောအခါမှာ အရာရာပြောင်းလဲဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ် တနေ့ တောင်အောက်က ရွာမှာ မီးသွေးသွားရောင်းပြီး ပြန်အလာမှာ သူ့မိသားစုဟာ Demon တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ် တစ်မိသားစုလုံး အသတ်ခံ ...
TMDb: 8.8/10 350 votes
Parasyte -the maxim- Ep 1 Ep2Ep3Ep4Ep5Ep6Ep7Ep 8 Ep9Ep 10 Ep 11 Ep 12 Ep 13 Ep 14 Ep 15 Ep 16 Ep 17 Ep 18 Ep 19 Ep 20 Ep 21 Ep 22 Ep 23 Ep 24 LazyAss
TMDb: 8.4/10 197 votes
Mobile Suit Gundam 00 Mobile Suit Gundam 00 Season I Gener: Action, Military, Sci-Fi, Space, Drama, Mecha Imdb 8.2; Myanimelist 8.2 Total Episode 25 Major Award-Anime Grandpix(2nd Position-ဒုတိယဆု) ။ အဆိုပါနှဈအတှကျ anime grandpix ပထမဆုရှငျကတော့ ကြှနျတေျာ့အကွိုကျဆုံးနဲ့ epic အဖွဈဆုံး anime ကွီး Code Geass ဖွဈပါတယျ။ Sypnosis ကမ်ဘာကွီးမှာဇီဝရုပျကွှငျးလောငျစာတှကေုနျခမျးလာတဲ့အတှကျ ၂၁ ရာစုအကုနျမှာ ကမ်ဘာ့မဟာအငျအားကွီးအဖှဲ့ကွီးသုံးဖှဲ့ဖွဈတဲ့ Union, AEUနဲ့ Human Reform League တို့ဦးဆောငျပွီးတော့ စှမျးအားရငျးမွဈသဈတဈခုဖွဈတဲ့နစှေမျးအငျဘကျကိုခွဦေးလှညျ့ခဲ့ကွပါတော့တယျ။ ကီလိုမီတာ5သောငျးကြျောရှညျလြားတဲ့ကမ်ဘာပတျဓာတျလှကေားကွီ3းခုကိုနှဈ200နီးပါးအခြိနျယူတညျဆောကျအပွီး10နှဈအကွာ AD2307မှာ လူတှဟော ထငျမှတျမထားတဲ့အဖွဈကွီးတဈရပျနဲ့ကွုံတှရေ့ပါတော့တယျ။အဲဒါကတော့ စဈပှဲတှကေိုရှငျးထုတျပဈမယျလို့ကွှေးကွျောလာတဲ့ Celestial Being ဆိုတဲ့အဖှဲ့ပါ။ မကုနျခမျးနိုငျတဲ့နစှေမျးအငျကွီးရတဲ့အထိကို တဈဖကျနဲ့တဈဖကျရနျစောငျတာတှေ အကွမျးဖကျမှုတှရှေိနသေေးတဲ့လောကကွီးဟာCelestial Beingပျေါထှကျလာတဲ့အခါမှာ အတျောကိုပွောငျးလဲသှားပါတယျ ပွောငျးလဲမှုကတော့အကောငျးရော အဆိုးရောဒှနျတှဲနခေဲ့တာပါ။ Celestial Being ရဲ့ တာဝနျတှဟော Gundam ဆိုတဲ့အလှနျအစှမျးထကျတဲ့ mobile ...